သဒ္ဓါလှိုင်း: ဒေါသကင်းရေး (၁၀) ချက်ဆေး
ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ဆိုတာ တကယ်တော့ မလွယ်ကူ ပါဘူး…!!!
ဒါပေမဲ့ ဒေါသ ထိန်းချုပ်ဖို့ အကျိုးရှိမဲ့ အကြံပြုချက်တွေတော့ ရှိပါတယ်…။
တယောက်ယောက်က သင့်ကို ကားလမ်းကြောင်း ပိတ်လိုက်တဲ့ အခါ သင့်ကိုယ်သင် ဒေါသ ထွက်တာ ခံစား ဖူးပါသလား?
သင့်သားသမီးက သင်ခိုင်းတဲ့ အတိုင်း လုပ်မပေးခဲ့ရင် တွေးတွေးပြီး ဒေါသ ပေါက်ကွဲ ဖူးပါသလား?
ဒေါသ ဆိုတာ ပုံမှန် ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှု တခုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အကောင်းမြင်ပြီး တိုးတက်မှု ဖြစ်စေတဲ့ နည်းလမ်းကို ဘယ်လို သိနိုင်ပါ့မလဲ?
ထိန်းချုပ်မှု မရှိတဲ့ ဒေါသဟာ ဆိုးရွားတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် တခြား တစိမ်းတွေ နဲ့ ဒေါသဖြစ်စရာ တခုခု ဖြစ်လာရင် ဒေါသ ကင်းဝေးရေး အတွက် လုပ်ရမဲ့ ပင်ကိုယ် စွမ်းရည်ကို အသုံးချဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ ဆိုတာ သိဖို့ လိုပါတယ်။
ဒေါသကင်းရေး ၁၀ ချက်ဆေးဟာ သင့်ရဲ့  ဒေါသတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကူညီနိုင်မဲ့ နည်းလမ်း အဖြစ် အသုံးပြုဖို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။
(၁) ခေတ္တခဏ အချိန်ယူ တတ်အောင် လုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ဖို့ တဘက်သားကို ခွန်းတုံ့ မပြန်ခင် ၁ ကနေ ၁၀ အထိ လက်ချိုး ရေတွက် လိုက်ပါ။
(၂) ကာလလေး တခု လုပ်တတ်အောင် လုပ်ပါ။
ခံပြင်းစရာတွေကို သက်သာခွင့် ရတဲ့အထိ ဒေါသကို တအောင့်လောက် ထိန်းလိုက်ပါ။
(၃) စိတ်တည်ငြိမ်အောင် လုပ်ပြီး သင့်ရဲ့ ဒေါသကို ရင်ဖွင့် ပြောပြတတ်အောင် လုပ်ပါ။ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်တဲ့ နည်းကို မသုံးပဲ သင့်ရဲ့ ခံပြင်းမှု၊ မချင့်မရဲ ဖြစ်မှုကို ထုတ်ဖေါ် ပြောပြဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဟာ အခြေအနေကို ပိုလို့ ဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။
(၄) လေ့ကျင့်ခန်း တခုခု လုပ်လိုက်ပါ။ ကာယ လှုပ်ရှားမှု လုပ်တာဟာ သင့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ အတွက် ထွက်ပေါက် တခု ဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒေါသ ပေါက်ကွဲ လုဆဲဆဲ အချိန်မှာ လုပ်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အပြင်ထွက်ပြီး ခပ်သွက်သွက် လမ်းလျှောက်၊ ဒါမှမဟုတ် ပြေးလိုက်၊ ဒါမှမဟုတ် ရေကူးလိုက်၊ ဒါမှမဟုတ် အလေးမလိုက်ပါ။
(၅) တခုခု မပြောခင် အသေအချာ စဉ်းစားလိုက်ပါ။ မစဉ်းစားမိပဲ ပြောမိမယ် ဆိုရင် ၀မ်းနည်း စိတ်ထိခိုက် လာပြီး ရန်များဖို့ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ သင်ပြောချင်တာကို လက်ရေးနဲ့ ရေးချလိုက်ပါ။ ဒီလို လုပ်လိုက်တာနဲ့ ပြဿနာတွေကို ပြီးအောင် လုပ်နိုင်ပြီး ဒေါသ ထွက်တဲ့အခါ လမ်းကြောင်း ပြောင်းတဲ့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း တခု ဖြစ်မှာပါ။
(၆) ပြဿနာတွေကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာလိုက်ပါ။ သင့်စိတ်ကို ကယောက်ကယက် လုပ်တဲ့အပေါ် အာရုံ စိုက်မဲ့ အစား၊ အဓိက ပြဿနာကို ဖြေရှင်း ဆုံးဖြတ်ဖို့ ဒေါသ ထွက်အောင် လုပ်တဲ့ သူနဲ့ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
(၇) ပြဿနာကို ထုတ်ဖေါ်တဲ့ အခါ `ကျတော်၊ ကျမ´ ဆိုပြီး သုံးနှုန်း ပြောဆိုပါ။ ဒီလို သုံးနှုန်း ပြောဆို လိုက်တာနဲ့ ဝေဖန်တာတို့၊ အပြစ်တင်တာတို့ ကို ရှောင်ကြဉ် နိုင်မှာပါ။ သူတပါးကို ဒေါသ ဖြစ်အောင် လုပ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် မကျေမချမ်းအောင် လုပ်တာ တွေကို ရှောင်ရှား နိုင်မှာပါ။ စိုးရိမ် ပူပန်မှု၊ အားပြိုင်မှုတွေ မရှိလာ နိုင်တော့ပါဘူး။ ဥပမာ… ` ကျတော့ အိမ်အလုပ်တွေကို ခင်ဗျား တကယ်ကူညီ သင့်တယ်ဗျာ´ လို့ ပြောမဲ့အစား ` ကျတော် စိတ်မချမ်းသာဘူးဗျာ.. ဒီညနေ ကျတော့ အိမ်အလုပ်တွေကို ခင်ဗျား ကူညီပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး´ လို့ ပြောလိုက်တာမျိုးပေါ့။
(၈) သ၀န်တို၊ မနာလိုတာတွေ မလုပ်ဖို့ပါ။
တကယ်လို့ သူတပါးကို ခွင့်လွှတ် နိုင်ရင် နှစ်ဦးစလုံး အတွက် အဆင်ပြေမှာပါ။ သင်လိုချင်တဲ့ အတိုင်း လူတိုင်းကို အဆင်ပြေအောင် ဆက်ဆံဖို့ မျှော်လင့်ထားတာ သဘာဝ မကျပါဘူး။
(၉) စိတ်ဖိစီးမှု ကို ရယ်စရာ ဟာသလုပ်ပြီး ချေဖြတ် ပစ်လိုက်ပါ။ ရယ်စရာ လုပ်ပစ် လိုက်ခြင်းဟာ စိတ်ပင်ပန်း ညစ်နွမ်းမှုကို ပျံ့နှံ့အောင် လုပ်လိုက် သလိုပါပဲ။ စောင်းချိတ်တဲ့ စကား ထေ့လုံး ငေ့ါလုံးတွေ မပြောမိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလို ပြောလိုက်မိတဲ့ အတွက် ခံစားချက်တွေ ကို နာကျင်စေ နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အရာခပ်သိမ်း ကို ပိုဆိုးရွား စေနိုင်ပါတယ်။
(၁၀) အပန်းဖြေ အနားယူတဲ့ အလုပ် ကို လေ့ကျင့်ပါ။ အနားယူဖို့ နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု လျှော့ချခြင်း ဟာ သင့်ဒေါသကို ထိန်းချုပ် ပေးနိုင်ပါ လိမ့်မယ်။ အသက်ရှူ လေ့ကျင့်ခန်းကို များများ လေ့ကျင့်ပါ။ အနားယူတဲ့ မြင်ကွင်းကို တွေးကြည့် ကြည့်ပါ။ ညင်သာတဲ့ စကားလုံးတွေ ကို ထပ်တလဲလဲ တွေးကြည့်ပါ။ ဥပမာ… သက်သက် သာသာ နေပါ။ ဒေါသကို လျှော့ဖို့ တခြား ခိုင်မာတဲ့ နည်းလမ်း တွေကတော့ သီချင်း နားထောင်ပါ။ စာများများ ရေးပါ။ ယောက ကျင့်ပါ။
လူတိုင်းနီးပါးတော့ ဒေါသ ဖြစ်ဖူး ကြမှာပါ။ ကျမလည်း ဒေါသ ထွက်လာရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်..။ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲပေါ့..။ ဒေါသကို ပေါက်ကွဲ ထွက်လိုက်ရင်ပဲ စိတ်ချမ်းသာ သလိုလို၊ ဒေါသကို မြိုသိပ် လိုက်တာက ကောင်းသလိုလို၊ ပင်လယ် ကမ်းခြေသွားပြီး အော်ဟစ် လိုက်ရင်ပဲ ဒေါသ ပြေသွားသလိုလို၊ တောင်ထိပ်ပေါ် တက်ပြီး အော်ရင်ပဲ ရင်ထဲမှာ ပေါ့သွားသလိုလို...အဲလို သလိုလို တွေကြားထဲမှာ ဒီနည်းလမ်းလေးကို သုံးကြည့်ရင် ကောင်းမယ် ထင်တယ်နော်...။ ဒီစာလေးကို ဖတ်ပြီး ဒေါသထွက်တဲ့သူတွေ အနည်းဆုံးတော့ ပြုံးမိသွားမယ် လို့ ထင်ပါတယ်....။ ဟုတ်လား မဟုတ်လား စမ်းကြည့် ရအောင်နော်...။
www.funzug.com မှ ဘာသာပြန်သည်။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:06 PM
သဒ္ဓါရေ.... ဒီအချက် (၁၀) ချက်ထဲက အားလုံး မဟုတ်တောင် တ၀က်လောက် လိုက်လုပ်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်နော်။ မလုပ်နိုင်တော့ ဒေါသကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အင်အား သိပ်မရှိသေးဘူး။း)
ကြိုးစားကြည့်အုံးမယ် .. ။ မျှဝေပေးတာလေးကို ကျေဇူး..။
ပြောတာတော့လွယ်တယ် အလုပ်ခက်သလိုပဲ ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပါ့မယ်
ဖတ်ပြီးပြုံးယုံတင်မဟုတ်ပါဘူး. အသံထွက်အောင် ရယ်သွားပါတယ်.. ကိုယ်ကလဲ ဒေါသကြီးတဲ့ သူထဲမှာ ပါတာကိုး..
ဒေါသကို အလျှင်စလို မထွက်ဖြစ်အောင်တော့ ကြိုးစားနေပါတယ်.. ဒေါသဆိုတာ အမှားတွေဖြစ်အောင် အားပေးတဲ့အရာဘဲ မဟုတ်လား..
ကိုယ်က ဒေါသကြီးတတ်တဲ့သူဆိုတော့ ဒီပိုစ့်လေးက ကိုယ့်ကို အကျိုးများစေတယ်...
ကိုဏီလင်းကတော့ positive thinking နဲ့တော့လှည့်တွေးတတ်တယ်...။ သူလည်းလေလောကီသားပေမို့ဆိုတဲ့ အတွေးလေးရောပေါ့...။ ပြီးတော့ အရမ်းဒေါသထွက်စရာကြုံလာပြီဆို လူရှင်းတဲ့တစ်နေရာကို အမြန်ဆုံးရှောင်ထွက်ပြီး ခဏလောက်တစ်ယောက်ထဲနေပစ်လိုက်တယ်လေ...။
ကျမနဲ့ လွဲခဲ့ရတဲ့ ဖက်ထုပ်ခေါက်ဆွဲ…
တိုင်းပြည် ဂုဏ်ဆောင် ဇာနည်ဖွား
`သူ´ ဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်…..